COSS စျေး - အွန်လိုင်း COSS ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို COSS (COSS)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ COSS (COSS) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ COSS ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
COSS – COSS
Market ကဦးထုပ်: $4 143 381.00
volume_24h_usd: $281 559.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ COSS တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
COSS များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
COSSCOSS သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$28.57COSSCOSS သို့ ယူရိုEUR€24.24COSSCOSS သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£21.89COSSCOSS သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.26.08COSSCOSS သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr258.35COSSCOSS သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.180.57COSSCOSS သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč637.81COSSCOSS သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł106.97COSSCOSS သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$38.24COSSCOSS သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$39.92COSSCOSS သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$639.65COSSCOSS သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$221.44COSSCOSS သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$155.35COSSCOSS သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹2143.59COSSCOSS သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.4797.14COSSCOSS သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$39.22COSSCOSS သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$43.26COSSCOSS သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿892.08COSSCOSS သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥199.08COSSCOSS သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥3026.54COSSCOSS သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩33976.43COSSCOSS သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦10814.29COSSCOSS သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽2106.09COSSCOSS သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴790.02
COSSCOSS သို့ BitcoinBTC0.00246 COSSCOSS သို့ EthereumETH0.0752 COSSCOSS သို့ LitecoinLTC0.497 COSSCOSS သို့ DigitalCashDASH0.294 COSSCOSS သို့ MoneroXMR0.305 COSSCOSS သို့ NxtNXT2065.71 COSSCOSS သို့ Ethereum ClassicETC4.06 COSSCOSS သို့ DogecoinDOGE8192.86 COSSCOSS သို့ ZCashZEC0.304 COSSCOSS သို့ BitsharesBTS1117.43 COSSCOSS သို့ DigiByteDGB1047.71 COSSCOSS သို့ RippleXRP96.69 COSSCOSS သို့ BitcoinDarkBTCD0.979 COSSCOSS သို့ PeerCoinPPC97.89 COSSCOSS သို့ CraigsCoinCRAIG12938.86 COSSCOSS သို့ BitstakeXBS1210.86 COSSCOSS သို့ PayCoinXPY495.71 COSSCOSS သို့ ProsperCoinPRC3562 COSSCOSS သို့ YbCoinYBC0.0153 COSSCOSS သို့ DarkKushDANK9103.43 COSSCOSS သို့ GiveCoinGIVE61457.43 COSSCOSS သို့ KoboCoinKOBO6612 COSSCOSS သို့ DarkTokenDT26.32 COSSCOSS သို့ CETUS CoinCETI81945.14